लॉटरी परिणाम, ज्याकपट्स र नम्बरहरू लटरी.कट
$ 356 मिलियन
Estimated Jackpot - Jun 02, 2020
तपाईंको फोनमा लटरी खेल्नुहोस्!
तपाईंको टिकटहरू ट्र्याक गर्नुहोस्, तपाईं जित्दा सचेतहरू पाउनुहोस्, र द गो मा प्ले गर्नुहोस्। अनुप्रयोगको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
वा हाम्रो अनुप्रयोग को बारे मा अधिक जान्नुहोस्
अर्को ड्रई सम्म
$ 135 मिलियन
$ 2.9 मिलियन
जीवनको लागि भाग्यशाली
एउटा खेल छनौट गर्नुहोस्
तपाईंको नम्बर छान्नुहोस्
आफ्नो टिकट प्राप्त गर्नुहोस्
तपाइँको जीत जम्मा गर्नुहोस्
तपाइँको मनपर्दो खेल छनौट गर्नुहोस्
तपाईं पावरबल, मेगा मिलियन्स, र अधिक हामी राज्यको राज्यहरूमा अधिक खेल्न सक्नुहुन्छ! तपाईं पनि विजयी संख्याहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, मितिहरू ड्र। गर्नुहोस्, र ज्याकपोट कुल सयौं अन्य लोटरी खेलहरूको लागि।
तपाईंको भाग्यशाली नम्बरहरू छान्नुहोस्
तपाइँको भाग्यशाली नम्बरहरू खेल्नुहोस् वा केवल दुई ट्यापहरूमा द्रुत पिकअप पाउनुहोस्। ट्याप, ट्याप, टिकट!
एक पटकमा tickets० टिकट खरीद गर्नुहोस्। हामी त्यहाँबाट सबै चीजहरू ह्यान्डल गर्नेछौं र तपाईंलाई जब जित्छौं तपाईंलाई सूचित गर्दछौं!
तपाईंको सबै जीत जम्मा गर्नुहोस्
तपाइँ तपाइँको जीत को १००% राख्नुहोस्! तपाईंको जीत तपाईंको ब्यालेन्समा रहनेछ ताकि तपाईं अधिक टिकटहरू खेल्न वा क्यासआउट अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं ठूलो ज्याकपटमा हिट गर्न पर्याप्त भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछौं र छुटकारा प्रक्रियामा तपाईंलाई सहयोग गर्नेछौं।
खेल सुरू गर्न तयार हुनुहुन्छ?
अनुप्रयोग स्टोर वा गुगल प्ले स्टोरमा Lottery.com अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्। केही क्षण भित्रमा सुरू गर्न तपाईंको खाता सेट अप गर्नुहोस्!
लटरी खेल्ने उत्तम तरिका
सबै खेल जुन तपाईं प्रेम गर्नुहुन्छ
यदि तपाईं हाम्रो LIVE राज्यहरू मध्ये एकमा हुनुहुन्छ भने तपाईं वास्तविक पावरबल र मेगा मिलियन्हरू खेल्न सक्नुहुनेछ तपाईंको मोबाइल उपकरणबाट सही लोटरी.कट अनुप्रयोग प्रयोग गरेर।
प्रयोग गर्न सुरक्षित
Lottery.com उद्योग को अग्रणी प्रविधि प्रयोग गरेर सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ जसले तपाईंको पहिचान, उमेर, र स्थान प्रमाणित गर्दछ सबैभन्दा उत्तम र सबैभन्दा सुरक्षित मोबाइल लटरी अनुभव प्रदान गर्न।
तपाईंको जित्ने सबै तपाईंको बैंक खातामा डेलिभर गर्नुहोस्, सुरक्षित र सुरक्षित रूपमा, जब तपाईं जित्नुहुन्छ! तपाइँ तपाइँको जीत को 100 प्रतिशत राख्नुहोस्!
"म यो अनुप्रयोग धेरै महिना देखि प्रयोग गर्दैछु र यसलाई त्यहाँका एक उत्तम अनलाइन लटरी-जाँच अनुप्रयोगहरूमा विचार गर्दछु।"
"तिनीहरूको ग्राहक सेवा निकै अचम्मको छ। जुनसुकै कुरा म सोधें, तिनीहरू छिट्टै जवाफ दिन्छन् र मेरो लागि सबै कुरा स्पष्टसँग वर्णन गर्दछन्। धेरै धेरै धन्यवाद।"
मा जानकारी जिम्मेवार खेल र समस्या गेमि available उपलब्ध छ। वा कल गर्नुहोस् 1-800-522-4700।